थप ३२३ जनामा कोरोना संक्रमण – Janasamsad
२४ जेष्ठ २०७७, शनिबार १६:४७
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमण ३२३ जनामा देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङ्मा आज मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमण ३२३ जनामा देखिएको बताए ।
उनले कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएकामा २८६ जना पुरुष र ३७ जना महिला रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना निको भएर ३२ जना घर फर्किएका छन् । कुल कोरोना निको हुनेको संख्या ३६५ जना पुगेको बताए ।
हालसम्म कोरोना भाइरसको आंशकामा पीसीआर विधिबाट ९२ हजार ४७७ वटा नमुना संकलन गरेर परिक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार १११ वटा नमुना संकलन गरेर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । हाल सातै प्रदेशका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा १ लाख ६८ हजार ३८ जना रहेका छन् ।
फिल्म हल खुलेपछि तत्काल के चलाउने ? निर्माता भन्छन्–‘जोखिम मोल्दैनौं’
पेट्रोलियम पर्दाथको डिपो राख्न नदिने स्थानीयको चेतावनी